Telo ny fanambarana ataon’i Jesoa amin’ny Farisiana: 1- Izy fahazavan’izao tontolo izao; 2- “Izy sy ny Ray dia iray ihany” (talata); 3- Izy sy Abrahama (alarobia). “Izaho no” (ἐγώ εἰμι ego eimi, YHWH) fahazavana. Ny fifandraisany amin’ny Ray no lazain’i Jesoa fa manamarina ny fanambarany. Izy no ilay fahazavana tsy mety lefy omena izao tontolo izao, lazain’ny Boky Fahendrena (Fah 18, 3-4). Izy no fahazavana mitarika ny diantsika ho any amin’ny fiainana mandrakizay. Izy no manazava ny tontolo misy antsika ka hahafahantsika mibanjina zavaboary rehetra araka ny tena izy, ka hahita tahaka an’Andriamanitra ka hilaza koa fa “tsara indrindra” izy ireny (Jen 1).
Manoloana ny fiampangana mitanila, mitondra vehivavy azo nijangajanga (tsy niaraka tamin’izay tratra niaraka taminy) dia tsotra ny valintenin’i Jesoa. Mametraka antsika eo anatrehan’Andriamanitra, ka hamindra fo tahaka ny namindrana fo tamintsika: izay tsy nanota taminareo no aoka hitora-bato azy voalohany (Alahady V taona D).
ALAHADY FAHADIMY AMIN’NY KAREMY TAONA D